यस कारण मागी विवाहमा यौन समस्या आउन सक्छः करुणा कुँवर - Riddle Nepal
यस कारण मागी विवाहमा यौन समस्या आउन सक्छः करुणा कुँवर
By santosh On Jun 16, 2018
नमस्ते करुणा दिदी,
तपाईले धेरैजनाको समस्याको समाधान गरिरहनु भएको कुरा अनलाइनखवरमा तपाईंका लेख पढेर थाहा पाइरहेकी छु । मेरो पनि समस्या ठीक हुने आशामा मैले समस्या पठाएकी हुँ ।
यस्ता समस्या अरु महिलामा पनि हुन सक्छन् । तर, यसरी खुलेर भन्न सक्तैनन् । सायद तपाईंको उत्तरले उनीहरुलाई पनि राहत महसुस हुनेछ ।
म २७ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो विवाह भएको ३ वर्ष भयो । श्रीमानको र मेरो सल्लाह अनुसार हामीले अहिलेसम्म सन्तान जन्माएका छैनौं । हामीमा कुनै स्वास्थय समस्या छैन ।
हामी एक अर्कालाई माया पनि गर्छौ । तर, यौन सम्र्पकको कुरा गर्दा धेरैजसो समयमा म आफूले सन्तुष्टिको अनुभूति नगरेको महसूस हुन्छ ।
म आफू मात्रै होइन, श्रीमानले पनि पूर्ण सन्तुष्टिको महसूस गर्नु हुन्न । मेरो यस्तै अवस्था भयो भने भविष्यमा के होला, कतै श्रीमानले पछि गएर अरुसँग सम्बन्ध बिस्तार गर्नु हुने हो कि भन्ने पीर लाग्छ ।
कहिलेकाहीँ मैले कतै श्रीमानलाई असन्तुष्ट बनाइराखेको त छैन भन्ने पनि लाग्छ । तपाईकै लेखहरुमा पढेअनुसार यौन सन्तुष्टिका लागि फोर प्ले आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा भयो ।
तर, श्रीमानसँग यस किसिमको अनुभव छैन । मैले यस विषयमा कुरा गर्दा पनि यस विषलाई महत्व दिनु हुन्न । यसरी सन्तुष्टि नहुँदा हामी दुवैजनालाई यौन सम्र्पकपछि दुखाइको अनुभव हुन्छ र हामी दुबैबीच लामो दिनसम्म यौन सम्बन्ध हुदैन । यो कस्तो समस्या हो ? यसबाट मुक्ति पाउन केही उपाय छन् कि ?
जवाफः चिकित्सकको सल्लाह लिनोस्
तपाईको जस्तै समस्या लिएर मकहाँ आउने थुप्रै महिलाहरु छन । कतिपय महिलाहरुमा चरम सन्तुष्टिमा नपुग्ने समस्या हुन सक्दछ भने कतिपय महिलाहरुले जीवनकालभरी नै चरम सन्तुष्टिको अवस्था प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पनि गर्ने गरेका छन् । अनुसन्धानका अनुसार ४२ प्रतिशत महिलामा कहिलेकाही चरम सन्तुष्टिमा पुग्न नसक्ने समस्या हुन्छ र १० प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालभरि एकपटक पनि चरम सन्तुष्टिमा नपुगेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
जो महिला आफ्नो जीवनकालमा एकपटक पनि चरम सन्तुष्टिमा नपुगेको वा कहिलेकाहीँ मात्र चरम सन्तुष्टि लिएको अनुभव गरेका हुन्छन् भने उनीहरुले मनोविद् वा चिकित्सकको सल्लाह लिन आवश्यक हुन्छ । किनकि यसो हुनुका पछाडि मनोबैज्ञानिक पक्षहरु लुकेका हुन्छन् । तिनको कारण पत्ता लगाई समयमै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब तपाईंले भोगिरहनु भएको समस्या के हो भन्ने छोटो चर्चा गरौं ।
महिलामा हुने यस्तो समस्यालाई एनोरगाज्मीया भनिन्छ । यो यौनमनोविज्ञानमा अध्ययन गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण पाटो हो । एनोरगाज्मियाका बारेमा थाहा पाउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यसो हुनुमा जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कारण हुन सक्दछन् ।
जैविक कारणमा जीर्ण रोग जसले नशामा असर गरेको हुन्छ वा कुनै रासायनिक वा औषधिको लामो समय सम्मको प्रयोगले पनि एनोरगाज्मिया हुन सक्दछ । यसको अर्थ यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसक्नुमा शारीरिक कारण पनि हुन सक्दछ । यसका लागि कुनै अस्पतालमा गएर फिजिसियनलाई भेट्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सामाजिक कारणमा पार्टनर सँग कम कुराकानी हुने वा हुदै नहुने, एकअर्कावीच झगडा भैरहने वा सांस्कृतिक वा धार्मिक विश्वास जसमा महिलाले यौन ईच्क्षालाई प्रकट गर्न नहुने मान्यता लिएको छ । त्यस्तोमा पनि महिलामा एनोरगाज्मिया हुने पाइएको छ । यस्तो समस्या विशेषगरी मन नपरिकन मागी विवाह भएका जोडीहरुमा देखिएको छ ।
मनोवैज्ञानिक कारणमा दिक्दारिपन, चिन्ता, यौन रोग, गर्भ रहने डर जस्ता पक्षहरुको भूमिका हुन्छ । यदि यौन हिसा भएको इतिहास छ भने पनि एनोरगाज्मीया हन सक्दछ । चरम सन्तुष्टिमा नपुग्न सक्नुको कारणमा यीमध्ये एक वा यी सबैको मिश्रण भएको पाइएको छ । हरेक महिलामा एनोरगाज्मिया एउटै कारणले हुदैन । त्यसकारण यीमध्ये कुन कारण हो त्यसलाई पत्ता लगाउन आवश्यक हुन्छ र जुन कारण होे त्यस अनुसारको उपचार गरिनुपर्दछ ।
यसअन्र्तगत प्रचलित उपचार अन्र्तगत दम्पत्तिमा गरिने परामर्श र चिकित्सकीय उपचार हो । यस अन्र्तगत अर्को उपायमा महिलालाई कसरी उत्तेजना हुन्छ, त्यस्तो बिधि अन्तर्गत त्यस्तो प्रयास गर्न पनि सल्लाह दिईन्छ । यसअन्र्तगत हस्थमैथुन पनि पर्दछ । हस्थमैथुन बिधि अपनाउने क्रममा यौन आनन्दको महसूस हुन्छ भने त्यसलाई सफल मानिन्छ । आफूलाई यदि कुनै बिधि ठीक लागेमा आफ्नो पार्टनर सँग भन्ने र त्यही बिधि अनुसार पार्टनरलाई यौन सम्पर्क राख्न भन्ने गरिन्छ ।
यदि एक अर्कासँग मनको कुरा गर्ने, कुराकानी गर्ने, एकअर्कालाई सम्मान देखाउने जस्तो कुराको कमी हो भने पनि त्यस बारेमा खुलेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको पनि कारणको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न किसिमको औषधि उपचार भएता पनि धेरैजसो महिलाहरुलाई औषधिको सेवनले प्रभाव नपारेको कुरा बताउनुहुन्छ । किनकि कुनै पनि औषधि जादु भने होइन । विशेष गरेर यदि मनोवैज्ञानिक वा सामाजिक कारण लुकेको छ भने औषधिले समाधान गर्न सक्दैन । समय र पैसाको नोक्सान मात्र भइरहन्छ ।
तपाईको बारेमा भन्नु पर्दा तपाई र तपाईको श्रीमानवीच हाल सुमधुर सम्बन्ध छ जस्तो बुझिन्छ र तपाईहरु आफैले पनि यौन सन्तुष्टिका लागि प्रयास गर्दै हुनुहन्छ । तर, तपाईको प्रयासले अझै काम गरिरहेको छैन भने तपाईको सम्बन्धलाई बिगार्नबाट बचाउनका लागि तपाईहरु दुवैले खुलेर एकअर्का सँग कुरा गर्ने र दम्पत्ति परामर्श लिन आवश्यक छ ।
लामो समयसम्म समस्यालाई राखी राख्दा ग्लानी, हिनताबोध, र दुई दम्पत्तिबीचको बुझईमा कमी आउन थाल्दछ । तपाईहरु मध्ये एकजनाको कारणले यौनमा चरम सन्तुष्टिको अनुभव हुन नसकेको हो की दुवैजनाको समस्याले हो, त्यसलाई पत्ता लगाउन पनि विशेषज्ञको सल्लाह लिन आवश्यक हुन्छ ।
प्रचण्डको स्पष्टीकरणः गल्ती गरे मेरै घरबेटीलाई पनि कारबाही हुन्छ
महिलाको योनि र अनुहार किन सबैभन्दा असुरक्षित ?
नेपालमा बढ्दैछन् क्यान्सरका बिरामी : ठूलो आन्द्राको क्यान्सरबारे जानीराखौं
रक्सी खाएर बढी यौन आनन्द आउँछ भन्ने मुर्ख हुन, भविष्यमा लिङ्ग उत्तेजना नहुने र सिघ्र…
तिन महिना नपुग्दै पटक–पटक गर्भ खस्ने समस्या छ, यस्तो छ डा. अनुपमा शर्माको बच्ने…